Izany indrindra no antony nahatonga ny fikambanana ONG AFFAMI tarihin-dRamatoa Raherisoa Vololona nanatanteraka fiofanana maimaimpoana momba ny fiompiana omby vavy be ronono, kisoa, akoho gasy sy vorona omaly alakamisy 02 mey teny amin’ny efitrano malalaky ny fokontany Ambodivonkely. Ankoatr’izay dia nisy ihany koa ny fanaovana vaksiny ny biby ka antsasa-bidy ihany no naloan’ireo mpiompy. Izany no natao mba hijerena akaiky ny mpiompy sy ny mpamboly izay maro an’isa eny amin’ny boriborintany faha-6. Mbola hitohy hatrany moa ny asa sosialy hotanterahin’ny fikambanana AFFAMI ka hisy indray ny fanatanterahana famoran-jaza faobe maimaimpoana hanomboka ny sabotsy 11 mey ho avy izao ary hifarana ny sabotsy 01 jona ho avy izao. Amin’ireo fotoana ireo moa dia homena malabary sy kilalao ary vatomamy sy biskoitra maimaimpoana ireo zaza.